सरकार, यसरी कहिले हुन्छ पुर्ननिर्माण ? - विवेकशील नेपाली
सरकार, यसरी कहिले हुन्छ पुर्ननिर्माण ?
बैशाख १२ गतेको बिनाशकारी भूकम्पका कारण करिब नौँ हजार जनताले ज्यान गुमाउनु पर्यो । सरकारी र गैर(सरकारी भवनहरू बाहेक १३०४८९ निजि घरहरु पूर्णरुपमा र १३४९६३ घरहरू आंशिकरुपमा क्षति भए । यी जनताका घर बनाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिइयो, दाताबाट अर्बौ रुपैयाँ पनि आयो तर त्यी पीडितको भूकम्प गएको एक वर्ष बिति सक्दा सम्म पनि बनेन । अब बन्छ या बन्दैन त्यसको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
भूकम्पपश्चात असारे झरीमा रुझ्दै पीडित घर बन्ने आशमा बसे तर सरकार लाचार बस्यो । पीडितको टहरोमा एक सरो लुगा र बेलुकाको गास पनि थिएन तर सरकार र नेता गणका लागि त्यसको कुनै वास्ता भएन । बरु विदेशी संस्थाले दया गरेर केही राहत बितरण गरे । त्यसपछि संविधान बन्यो, सरकार फेरियो, आशाका किरणहरु पलाए तर अहँ केही हुन सकेन । पीडित जनता १ गाग्री पानी लिन भूकम्पबाट मुहान फुटेर १ घण्टा पर जान्छन् तर सरकार पाइलाबाट घरघरमा ग्यास पुर्याउने कुरा गर्छ उसलाई पानीको कुनै मतलव छैन । चाहे जनता प्यासै मेट्न नपाउन ।
यतिमात्र कहाँ होर पुष-माघको जाडोमा लुगलुग काम्दै सयौँ पीडित बिरामी भए । अलिअिल भएको पैसा पनि उपचार गर्दैमा सकयिो । दर्जनौको ज्यान गयो तर सरकार लाचार बनि तमासा हेरेर बस्यो । फेरि चैतको हुरीले बाकी रहेको थोत्रो पाल पनि उडाउन थाल्यो । आझै यो सरकार विभिन्न बहाना बनाउदै पुर्नःनिर्माणको काम एक वर्ष लम्ब्याउन खोज्दै छ ।
८० वर्ष अगाडि ९० सालमा भएको भूकम्पले भत्किएको धरहरा २ बर्षमा नै पुनः निर्माण भएको थियो । अन्य पुर्वाधार पनि चाडै बनेका थिए । तर आज प्रविधिको युग छ तर किन सरकार एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि लाचार छ ? पुनःनिर्माणको त कुरै छाडौँ धरहरा वरिपरी झरेको धूलोसम्म हटेको छैन ।
पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण को जिम्मा कसको ?देश भर जम्मा ७७३ पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको प्रोजेक्ट मध्य हिजोको मिति सम्म ( ३५० औ दिन ) ४९ सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको लागि टेन्डर आब्हान गरिएकेको छ,
बाकी कहिले गर्ने ?
केही महिनाअघि रानी पोखरीबाट पुनः निर्माण सुरु भयो भन्दै तामझमका साथ महाअभियानको औपचारिक सुरुवात गरियो । तर त्यो पनि विदेशी र दातालाई देखाउने र जनतालाई भ्रममा पार्ने काम बाहेर केही हुन सकेन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठण महिनौ भइ सक्यो , केहि दिन अघिको डाटा हेर्ने हो भने २ सय ८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा सरकारले करिब आधा कर्मचारी मात्रै खटाउन सकेको छ, चाहिएको कर्मचारी खटाउन सकेको छैन भने खटाएको कर्मचारीको हाजिरी छैन , प्राधिकरणमै गएका केही कर्मचारीहरू अन्यत्र फर्किएका छन् । सरकारले आफूले प्राथमिकतामा राखेको कार्यसम्पादन गर्ने अड्डामा नै जनशक्ति परिचालन गर्न सकेको छैन ।अनि यसरि कहिले हुन्छ पुर्ननिर्माण ?
म आझै सम्झन्छु ती दिन । ती बैशाख १२ पछिका दिन जहाँ हर क्षेत्रका व्यक्तिले आ–आफ्नो स्रोत साधन समयले पुगेसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरेका थिए । भूकम्प पीडितको सहयोगको लागि दिन रात खटिएका थिए । विवेकशील नेपाली दल त भूकम्प गएको २५ मिनेटमै उद्धारमा लागेको थियो ,यसरी जनता र विदेशीबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेपछि सरकारलाई अन्य जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । तर आज सम्म पनि सरकारले त्यो जिम्मेवारी निभाउन सकेन । आफ्नो लगानी र खर्चको त कुरै छाडौँ विदेशीले दिएको पैसाको समेत सदुपयोग गर्न सकेन ।
तिमी कहाँ छौ सरकार ? दाताले दिएको ६५ अर्ब भोज र मोजमा सकियो कि अझै बाँकी छ ?